Martial Art အလန်းစားကြီးတွေကိုကြိုက်တဲ့ Mobile Player များအတွက် Shadow Fight 2! | Playon.com
Home » Article » Martial Art အလန်းစားကြီးတွေကိုကြိုက်တဲ့ Mobile Player များအတွက် Shadow Fight 2!
Martial Art အလန်းစားကြီးတွေကိုကြိုက်တဲ့ Mobile Player များအတွက် Shadow Fight 2!
RPG နဲ့ Classical Fighting နှစ်မျိုးကိုပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားတဲ့ ဂိမ်းလေးဖြစ်ကြောင်းဦးစွာပြောပါရစေ။ စစချင်းမှာအလွန်ထူးချွန်တဲ့ သိုင်းသမားတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသူ့ကိုသိုင်းပညာမှာဘယ်သူ့မှမယှဉ်နိုင်ပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် အဲ့ဒီသိုင်းသမားတစ်ယောက် သူနဲ့ယှဉ်ချနိုင်မယ့်သူကိုရှာဖို့ခရီးသွားရင်း Shadow အမည်တွင်တဲ့ Gate ကြီးကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Gate ထဲဝင်သွားတဲ့ အချိန်မှာအဲ့ဒီသိုင်းသမားတစ်ယောက် တခြား Dimension က မကောင်းဆိုးဝါးတွေနဲ့တွေ့ဆုံပါတယ်။ အဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးတွေက အဲ့ဒီသိုင်းသမားရဲ့ Soul ကိုယူပြီး အရိပ်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ အရိပ်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲခံလိုက်ရတော့အဲ့ဒီသိုင်းသမားတစ်ယောက်Shadow ဆိုတဲ့အမည်တွင်သွားပါတယ်။
ဒီဂိမ်းမှာ Shadow ကသူ့ရဲ့ Soul ကိုယူသွားတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးအားလုံးကိုလိုက်သတ်မှာပါ။ အဲ့ဒါကတော့ Shadow ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါ။ မိတ်ဆွေက Shadow ဆိုတဲ့သိုင်းသမားနေရာကနေ ဖိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုက်ရမယ့် မကောင်းဆိုးဝါးတွေက အများကြီးရှိပါတယ်။ အများကြီးရှိပေမယ့် တစ်ယောက်နဲ့အများ ဖိုက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ယောက်ချင်းစီ 1 Versus 1 ဖိုက်ရမှာပါ။ မျှမျှတတ ဖိုက်ရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ လက်နက်တွေ၊ Armor တွေကတော့ကွာပါတယ်။ တိုက်ခိုက်ရမှာက 1 Versus 1 ဖြစ်တာကြောင့် တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ Martial Art တွေကိုသေချာခံစားနိုင်မှာပါ။ လက်သီးထိုးတာတို့၊ လက်နက်ပါရင်လည်းလက်နက်နဲ့ချတာတို့၊ ခြေထောက်နဲ့ အရှေ့ အနောက် အပေါ်ကို ကန်တာတို့ကိုသေချာတွေ့မြင်ရမှာပါ။ လက်နက်တွေ၊ Armor တွေကိုတော့မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင် In-game ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ In-game ပိုက်ဆံတွေကတော့ မိတ်ဆွေ Monster တွေကိုဖိုက်တာတစ်ပွဲနိုင်ရင်တစ်ခါရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
လက်နက်တွေနဲ့ Armor တွေကတော်တော်စုံနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ လက်နက်တွေအနေနဲ့ကတော့ ဓားရှည်၊ Nunchacku ၊ လက်သည်းရှည်၊ မှော်ပညာရပ်၊ စတာတွေအပြင်အခြားသောလက်နက်အစုံအလင်ကိုလည်းတွေ့ရဦးမှာပါ။ စစပိုင်းမှာတော့ ရန်သူတွေကသိပ်မကြမ်းပေမယ့် နောက်ပိုင်းရောက်ရင် လက်နက်အကြီးစားတွေ၊ Armor ကြီးတွေနဲ့ ရန်သူတွေကိုတွေ့ရမှာမလို့ချရတာအနည်းငယ်တော့ခက်ခဲလာပါလိမ့်မယ်။ လက်နက်ချင်း၊ Armor ချင်းအရမ်းကွာနေရင်တော့ ရန်သူကမိတ်ဆွေကို3ချက်လောက်ချပြီး မိတ်ဆွေရဲ့ Shadow မှောက်သွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာပါ။
ဒီဂိမ်းမှာမိတ်ဆွေကမတူညီတဲ့ ကမ္ဘာ6ခုကိုဖြတ်သန်းရမှာပါ။ ကမ္ဘာ 1 ခုမှာ Level တော်တော်များများပါတာကြောင့် အကြာကြီးဆော့ကစားရမှာပါ။ Shadow Fight2မှာမိတ်ဆွေတစ်ခုသိထားရမှာရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ မိတ်ဆွေရဲ့ Shadow ဆိုတဲ့ Character ကသာမာန်လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Stamina ရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ။ Stamina ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်4(or)5ပွဲလောက်ချပြီးရင်ခဏနားပေးရမှာပါ။ မိတ်ဆွေမနားချင်လည်း သူ့ဘာသာ Energy ကုန်ပြီးအနားယူသွားမှာပါ။ အနားယူတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူနဲ့မှချလို့မရပါဘူး။
Free To Play ပါ။ Android နဲ့ IOS Platform နှစ်မျိုးလုံးမှာကစားနိုင်ပါတယ်။ RPG နဲ့ Classical Fighting ရောစပ်ထားတဲ့အပြင် Martial Art အမိုက်စားလေးတွေလည်းပါဝင်တာကြောင့်မိတ်ဆွေအားသတင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ ၁၆ ထွက်မယ့် Clash Royale Gameplay ကို FPS ထည့်ပေါင်းထားတဲ့ဂိမ်း Mighty Battles
အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ PUBG ပုံစံ Battle Royale ဂိမ်း ‘Guns Royale’
Gen3Pokemon အသစ်တွေပါဝင်လာမယ့် Pokemon GO ရဲ့ Spooky Halloween Event
Dual-Class Arena Mode ဆော့ကစားလို့ရမယ့် Hearthstone ရဲ့ Hallow’s End Event
ပြေးလမ်းပေါ်က ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ Traffic Rider
၂၀၁၈ မှာ Western Market ကိုရောက်ရှိလာတော့မယ့် ‘Gundam Battle’
0 မကြာမီလာမယ့် Star Wars ရုပ်ရှင်အတွက် ဒီဂိမ်းတွေကစားပြီး Mood ကြိုသွင်းကြမယ်
0 Mobile Platform ပေါ်ကို ခြေလှမ်းဆန့်လာတော့မယ့် EVE Online
0 Gen3Pokemon အသစ်တွေပါဝင်လာမယ့် Pokemon GO ရဲ့ Spooky Halloween Event
0 Hearthstone Halloween Event နဲ့အတူပါဝင်လာမယ့် Warlock Hero အသစ် Nemsy
0 Android အတွက် ထွက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ Thimbleweed Park
0 Gen3Pokemon? Halloween Event? စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သတင်းတွေနဲ့ Pokemon GO
Gen3Pokemon? Halloween Event? စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သတင်းတွေနဲ့ Pokemon GO
ထူးခြားတဲ့ Collaboration: ‘Angry Birds Evolution’ x ‘Iron Maiden’
တောအုပ်ကြီးထဲမှာ Rayman နေရာကနေဆော့ကစားရမယ့် Rayman Adventures!
ဂစ်တာဝါသနာအိုး Mobile Player တွေအတွက် Rock Life – Guitar Legend!
Vehicle များစွာသွားလာနေတဲ့ လမ်းတွေကိုဖြတ်ကူးရမယ့် Crossy Road!
သံစဉ်တွေနဲ့အတူ မြွေတစ်ကောင်တွားသွားနေ သလိုသွားနေရမယ့် Dancing Line!
မကြာမီလာမယ့် Star Wars ရုပ်ရှင်အတွက် ဒီဂိမ်းတွေကစားပြီး Mood ကြိုသွင်းကြမယ်
Android အတွက် ထွက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ Thimbleweed Park
Hearthstone Halloween Event နဲ့အတူပါဝင်လာမယ့် Warlock Hero အသစ် Nemsy
နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိလာမယ့် Murakami Haruki ရဲ့ဝတ္ထုတွေကို မှီငြမ်းရေးဆွဲထားတဲ့ဂိမ်း Memoranda